Tom And Jerry Green Valley - Online
နေအိမ် » ပြိုင်ပွဲ » တွမ်ထိုအဂျယ်ရီအစိမ်းရောင်ချိုင့်
ဖေါ်ပြချက်: အစိမ်းရောင်ချိုင့်အတွက်, တွမ်ဤမြို့၌စွန့်စားမှုဖို့ကားကိုမောင်း။ သူ့ကိုအားလုံး lelvels ပြီးအောင်အပေါင်းတို့နှင့်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းကိုကူညီပါ, သင့်ကိုအကောင်းဆုံးရမှတ်ဘာလဲ
(သို့သျောလညျးကို Ratings အဖွဲ့မရှိပါ)
ကစား: 34,048 tag ကို: တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီအားကစားပြိုင်ပွဲ, တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီ, ဒစ္စနေးဂိမ်း, Jerry ဂိမ်း, Tom ဂိမ်း
Tom ကြောင်နဲ့ Angie ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖက်ရှင်သစ်ပင်တပင်
ပေါက်တွမ်နှင့် Angela ဒီနှစ်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်တက် setting ကိုကူညီလိုပါတယ်။ သစ်ပင်ကိုရှေးခယျြနှင့်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကိုလှပတဲ့ဖြစ်စေမည်ဟုသမျှသောအဆင်တန်ဆာများကအားလုံးသင်တို့၏ကောင်းသောအရသာပြပါ။
High School တွင်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရမည်ဟုလုပ်နည်းဂိမ်းကစားသူရဲ့လမ်းညွှန် Pretty အများကြီးအရာအားလုံး! ပြန်လာပြီး Conor ပြန်လည်ဝင်ရောက်အသင်းကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်း!
စတစ်ကာ Defender ကိုမြို့တံခါးဝကိုခုခံကာကွယ်ဖို့စတစ်ကာများကိုအသုံးပြုပါ!
အမြဲ yonder မုန်းနဲ့ Dominic စစ်မှန်တဲ့အမုန်းကျော်လှည့်လည်
လှည့်လည်ကျော် Yonder မုန်းနဲ့ Dominic စစ်မှန်သောအမြဲတမ်းမုန်း။
သူမ၏အထင်ကြီးအားဖြင့် Dominic ရဲ့ကျူးကျော်မှုအင်အားကိုရပ်တန့်!
Penn သုည wingfire အကယ်ဒမီဝင်ရောက်စီးနင်း
မည်သည့်အတားအဆီးသို့ပြေးမပါဘဲ Penn ဝင်ရောက်စီးနင်း Wingfire အကယ်ဒမီကူညီပါ!
Penn သုညအခြိနျပိုငျးသူရဲကောင်း zap ထောင်ချောက်
Penn နှင့်အတူအပြီးအစီးမစ်ရှင်များ! Penn သုညအပိုင်း-Time သူရဲကောင်း Zap Trap ။
မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးထောင်ထဲ vs ကြယ်ပွင့်
ဒစ္စနေးသူရဲကောင်းခရီးစဉ်။ သူတို့ရဲ့သင့်လျော်ရာအရပျဖို့သင့်သူရဲကောင်းများရယူပါ! သင်၏အဆွေခင်ပွန်းမှဒီဂိမ်းကိုမျှဝေရန်နှင့်ပျော်စရာရ။
ဆွဲငင်အားကျရောက် - ရေတံခွန် weirdmageddon ပြန်ယူ
ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားရေတံခွန် - ရေတံခွန် Weirdmageddon နောက်ကျောကိုယူပါ။
Dipper နှင့် Mabel မကောင်းတဲ့ cipher အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကွောငျး Weirdmageddon အတွက်လိုက်တယ်နှင့်ဆိုးသောမိကျောင်းကိုတိုက်ကိုကူညီပါ။ Weirdmageddon တစ်ဘီလီယံနှစ်ပေါင်းပရောဖက်ပြုတစ်ဦး Apocalyptic အဖြစ်အပျက်လာကြောင်း
သူတို့ကောလိပ်များ၏အတန်းမှာဆင်းချီတက်ပွဲမှကိုချစ်အပေါင်းတို့သည်သားပေါက်အောင်နိုင်အဖြစ်ဒစ္စနေးမင်းသမီး Rapunzel, အဲလ်ဆာနဲ့ Anna, အစဉ်မပြတ်ဖက်ရှင်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးဟာမင်းသမီးအဝတ်အစားဆံပင်ပုံစံတွေ, ဖိနပ်နှင့်သူတို့ကိုအသီးအသီးအဘို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုကြည့်ရှေးခယျြကူညီပါ
ဒစ္စနေး Channel ကို Monstober Zap ဒီဂန္ Arcade ဂိမ်းထဲမှာအပါအဝင်တဲ့အထဲကသင်အကြိုက်ဆုံးဒစ္စနေး Channel ကိုဇာတ်ကောင်ကာကွယ်ပါ!
အဆိုပါသင်တစ်ဦးကြောင်၏စောင့်ရှောက်မှုယူဘယ်မှာ Sims နှင့်သူ၏နေ့စဉ်အသက်တာတာဝန်များကိုဆင်တူ။
လူငယ်များသို့အ Worm အတွက်ဖင်လန်ရဲ့ freaky အိပ်မက်ထဲကသင့်ရဲ့လမ်း Fight! ရှငျဘုရငျကို Worm ပင်ဂွင်းမိကျောင်း, ဖုတ်ကောင်သကြားလုံး, bombastic ဘာဂါ, Sonic ပိုးကောင်များနှင့်ပင် Lich နှငျ့ပွညျ့စုံတစ် bizarro အိပ်မက်ကမ္ဘာမှာထောင်ချောက်ဖင်လန်နှင့် Jake အားမိမိစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်အာဏာကို အသုံးပြု. ဖြစ်ပါတယ်
ဟေ့မိန်းကလေး, ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Rapunzel တစ်လက်ဖက်ရည်ပါတီရှိခြင်းနေပါသည်! သငျသညျကိုဖိတ်ကြားခံရဖို့ကိုကြိုက်ပါ့မလား သငျသညျသည်အခြားသူကိုရှိမယ့်သိ? အဆိုပါအံ့သြဖွယ် Frozen အဲလ်ဆာ! ငါသည်သင်တို့သူတို့ကိုပူးပေါင်းချင်ပါတယ်ကြောင်းသေချာပါတယ်။ ဒီဒစ္စနေး Princess လက်ဖက်ရည်ပါတီဂိမ်းထဲမှာသင်ကဗဲလ်ဖြုန်းနိုင်
Tom နှင့် Jerry အန္တရာယ်များသောခုန်
တွမ်ဒိန်ခဲဖမ်းပြီးမှဂျယ်ရီလိုက်ဖမ်း။ ဂျယ်ရီမြှား key ကိုသုံးပြီးပန်းသီး, ဒိန်ခဲစုဆောင်းဖို့လျင်မြန်စွာပြောင်းရွေ့ကူညီဖို့ပါ။ သင်သာဒီဂိမ်းကိုကစားရန်3ဘဝတွေကိုရှိသည်။
ဂျယ်ရီအားလုံးရန်သူရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ASDW key ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ငါတို့၏မင်းသမီးကယ်တင်ရန်, ရိုက်ကူးဖို့ mouse ကိုကိုအသုံးပြုဖို့ကိုကူညီပါ။
Tom နှင့် Jerry ဒိန်ခဲအမဲလိုက်ခြင်း
ဂျယ်ရီကပိုဒိန်ခဲစုဆောင်းရကိုကူညီပါနဲ့ Tom ဘို့ဆောင်ခဲ့ကြ။
Tom နှင့် Jerry သမုဒ္ဒရာကာကွယ်
ခရစ္စမတ်ညဉ့်အခါ, တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီကလေးတွေများအတွက်ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်ဂိုဒေါင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မစ်ရှင်ရှိသည်, ဂိုဒေါင်အလှူငါးမန်းတိုက်ခိုက်မှုရှိပါတယ်, ဂျယ်ရီဂိုဒေါင်သို့မသွားနိုင်ငါးမန်းရန်သူတို့ကိုပစ်ချရမည်ဖြစ်သည်။
Tom နှင့် Jerry ညားပိရမစ်
ဂျယ်ရီချုပ်သည်ရဲတိုက်၌ပျောက်ဆုံးသူကတွမ်လွတ်မြောက်ရန်ရမယ်, ဂျယ်ရီလမ်းကိုထွက်ကိုကူညီရှာဖွေ, ဒါပေမယ့်တွမ်ဖမ်းမိပါစေပါဘူးပေးပါ။ ရမှတ်နှင့်အသက်တိုးမြှင့်ဖို့လမ်းတစ်လျှောက်စိတျနှလုံးကိုစုဆောင်းပါ။
Tom နှင့် Jerry ရိုက်ကူးပူဖောင်းများ
ဂျယ်ရီတစ်ဦးကောင်းကင်တမန်သည်, သူသည်ပျံသန်းနှင့်အသုံးပြုပူဖောင်းများရိုက်ကူးဖို့လေး, သူ့ကိုတတ်နိုင်သမျှအများအပြားပူဖောင်းများရိုက်ကူးကူညီပေးနိုင်သည်။
Tom နှင့် Jerry ဟယ်လိုတစ္ဆေ
ဟယ်လိုညဥ့်အခါ, တွမ်သင်ဂျယ်ရီနက်ရှိုင်းသောအပေါက်နဲ့ Tom ဖမ်းမိဖို့သတိထားတစ်စက်ဖြစ်, အတားအဆီးကိုကျော်လွှား, အလျင်စလိုမှကူညီဂျယ်ရီလိုက်မှတစ္ဆေဖြစ်လာခဲ့သည်။
Tom နှင့် Jerry ဖရုံသီးစုဆောင်း
ဟယ်လိုဝင်းကိုညဉ့်တွင်, Jerry အဖရုံသီးနှင့်အတူဘတ်စကက်ဘောကစား, သူ့တောင်းဖို့ဖရုံသီးပစ်ရန်မစ်ရှင်, တောင်းပိုမိုမြင့်မားသင်ပိုမိုရမှတ်များရှိသည်။ ရဲ့တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီနှင့်အတူကစားစို့။
Tom နှင့် Jerry ကျွမ်းကျင်မှုလေးသမား
ဂျယ်ရီတွမ်၏ခေါင်းပေါ်မှာပန်းသီးတစ်လုံးရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်မြှားပစ်လေ့ကျင့်သင်တွမ်ထိမှန်စေခြင်းငှါ, အကြောင်းမူကား, သတိပြုရကြမည်ကိုကူညီပါ။
အေးစက်နေတဲ့: Anna စွန့်စားမှုအပိုင်း 1
အန္နအဲလ်ဆာကယ်တင်ရန်နှင့်သူမ၏နေအိမ်တွင်ရောက်စေဖို့လိုလားပေမယ့်ပြုပါရန်အလို့ငှာသူမကအချို့သောစိန်ခေါ်မှုများဖြည့်စွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ အန်နာနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်သစ်တောအတွက်နည်းလမ်းရှာမြှားခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။ သူမသည်စေရန်သုံးမှတ်တိုင်များရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကိုခုနှစ်, သငျသညျဟဲဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်
, အတားအဆီးများအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းသွားလာနေဖြင့်အန်နာနှင့် Kristoffer အဲလ်ဆာကိုရှာဖွေကိုကူညီပါ္ထုစုရုံးလျက်, finish ကိုလိုင်းမှရတဲ့။ ဒီပလက်ဖောင်းဂိမ်းဧကန်အမှန်အသင်တစ်ဦးဂိမ်းထဲမှာရှာနေပျော်ရွှင်စရာများနှင့်စွန့်စားမှုထုတ်ဆောင် ခဲ့. မည်ဖြစ်သည်။
Tom နှင့်ရီယိုမှ Jerry လမ်း
Tom နှင့် Jerry နှင့်အတူဘရာဇီး, 2014 Join နှင့်ကမ္ဘာခွက်ကိုပျော်လွန်းလို့
ဆွဲငင်အား pinesquest ကျရောက်
ထိုသတ္တိအမွှာတစ်ဦးစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ Dipper နှင့် Mabel ကိုကူညီပါ။ အန္တရာယ်တွေနဲ့ထောင်ချောက်တစ်တွေအများကြီးဤသို့သင်သတိထားရှိရမည်နဲ့တစ်ခုခုလုပ်နေတာမီကနှစ်ကြိမ်ထင်, သူတို့ရဲ့လမ်းအပေါ်သူတို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? Dipper နှင့် Mabel နှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်!
Tom နှင့် Jerry nibbles recuse
ဂျယ်ရီ၏အဆွေခင်ပွန်းတွမ်ဖမ်းမိခဲ့, သင်ဂျယ်ရီ, သူ၏နေရာကိုရန်သင့်လမ်းကိုရှာဖွေတွမ်အားဖြင့်ချပစ်သစ်လုံးကနေဝေးနေဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
ဦးလေးဘိုးဘိုး: ဘထွေးခမ်းနား vs အဒေါ်အဖွားအို
ဦးလေးအဘိုးဂိမ်း - အန်တီအဘွား vs ဦးလေးက Grand ။
အန်တီအဘွား vs ဦးလေးက Grand သင်နောက်တစ်နေ့ရင်ခွင်မှတိုးဖို့အန်တီအဖွားကိုရိုက်ရမယ်တဲ့ဒေါင်လိုက်အပြေးသမားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကြောင်ပီဇာကိုစုဆောင်းကိုကူညီပါများနှင့်သူတို့ကဒီပျော်စရာအွန်လိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်းအတွက်လမ်းများမှတဆင့် Racing အဖြစ်အတားအဆီးများရှောင်ကြဉ်ပါ။ Nickelodeon ဟော့ဗာပီဇာကြောင်, တစ်ဦးအခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းထဲမှာ, ကြောင်လမ်းများခေါ်ဆောင်သွားပြီ, မြို့ပတ်ပတ်လည် coll သူတို့ရဲ့ပျဉ်ပြားစီးနင်းကြသည်
Oggy ကြက်သားဆိုးပိုးဟပ်များကခိုးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရခြင်းနှင့်စွမ်းအင်နှင့်ပြိုင်ပွဲမြန်နှုန်းရဖို့ရန်သူအပေါင်းတို့ကိုကြက်သားစုဆောင်းပိုရမှတ်ဂိုးသွင်းဖို့ပထမဦးဆုံးအရာအရပျမှာရှိစေသတည်း။
ဒီပုံမှန်မဟုတ်သောယာဉ်ရပ်နားဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့အလုပ်ဟာယာဉ်ရပ်နားအများကြီးရမှ, သင်ကမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးကျော်လွှားရန်လိုအပ်ပါတယ် place.But တစ်ဦးယာဉ်ရပ်နားပေါ်တွင်သင်ကားတစ်စီးရပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးမြင့်မားသောဗို့အားရှိနှင့်သင့် car.You အချိန်တစ်မိနစ်ရှိကိုပျက်စီးစေနိုင်သော သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရ
ben10 ကြယ်ပွင့်ပြိုင်ကား 2
Ben10 အ moto စီးနှင့်ဤ Ben10 အားကစားပြိုင်ပွဲ၌ရှိသမျှသောအဆင့်လွန်ကိုကူညီပါ။ ပိုပြီးရမှတ်ရရန်လမ်းအပေါင်းတို့၌ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပါ။
အဆိုပါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စွန့်စားမှု Run ကိုအကွာအဝေးအပြေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာ Incredible အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သလောက်ပြေးခုန်ဖို့ကိုကူညီပါ။ သင်တတ်နိုင်သလောက်အများအပြားရမှတ်ဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားအဖြစ်ဖွင့်အဆုံးမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အပိုမှတ်ရဖို့နဲ့ရောက်ရှိရန်အသီးအသီးမိုင်မှာရွှေဖရုံသီးကိုစုဆောင်း
wheely7စုံထောက်
အခမဲ့ Wheely7ထောက်အွန်လိုင်းဂိမ်း Play ။
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်မြန်နှုန်းနတ်ဆိုး
ဒီပျော်စရာအွန်လိုင်းဂိမ်းထဲမှာ Donnie, Mikey, လီယိုသို့မဟုတ် Raph နှင့်အတူနယူးယောက်စီးတီး၏ယုတ်လမ်းများပေါ်တွင်ပတ်ပတ်လည်ကိုသင့်အင်ဂျင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင် Start! ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles မြန်နှုန်း Demon, တစ်ဦးအခမဲ့အွန်လိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာ, သင့်အကြိုက်ဆုံးဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်တစ်ကောက်
Shin chan စွန့်စားမှု
အသစ်တစ်ခုကိုစွန့်စားမှုဂိမ်းထဲမှာရှင်ချန်း။ အဖြစ်တာ Lollipop အပေါင်းတို့နှင့် milkshakes စုဆောင်း, သင်မူကားထိခိုက်စေနိုငျသောများစွာသောတိရစ္ဆာန်တွေကိုသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်။ Crayon ရှင်-chan
Naruto အရူး moto
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Naruto ကိုမိမိအရှုး moto မောင်းနှင်အားဖြင့်အားလုံးစိန်ခေါ်မှုလွန်ကိုကူညီပါ။ ဒီဂိမ်းကိုသင်ကစားရန်အဘို့အ 12 အဆင့်ဆင့်ရှိသည်။ ရဲ့သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူဆော့ကစားပါလေစေနဲ့ပျော်စရာရ။
Ladies and Gentlemen, သင့်အင်ဂျင်စတင်နှင့်ဤပျော်စရာအွန်လိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံး Nickelodeon ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လူကြမ်းအဖြစ်အချို့ကိုနှင့်အတူအပုဒ်ဝန်းကျင် Racing ဖို့အဆင်သင့်မရ။ Nickelodeon ပြိုင်ပွဲကြယ်တစ်အခမဲ့ပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာ, သငျသညျ <, သင့်ကားမောင်းသူကောက်
Spider-Man Monster ပွညျ၌ပျောက်ဆုံး, သူ့ကိုဆိုင်ကယ်နှင့်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြု. အိမ်ပြန်ဖို့အားလုံးကိုအတားအဆီးများနှင့်ရှုံးနိမ့်မိကျောင်းလွန်ကူညီပေးပါ။
ဒေါသအမျက် Clarence ဂိမ်းရထားဘီး
Clarence ဂိမ်း - အမျက်ဒေါသဘီး
သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင် Pick, သင်သည်အပုဒ်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့အမျက်တော်သည်တိုက်ဖျက်မည်အဖြစ်ပထမဦးဆုံးအရပ်မှသင့်ရဲ့လမ်းစီး!
ပုံမှန်ပြပွဲ - daredevil အန္တရာယ်
သင့်ရဲ့နျ့မလိုင်စင်ဝင်ငွေမှဂျော်နီ Crasher ရဲ့အရူးစိန်ခေါ်မှုများအပေါ်ကိုယူပါ။
Lego DC ရုပ်ပြအားကြီးသောမိုက္ကရို
DC Comics တန်ခိုးကြီးသော Micro Lego ။ အဆိုပါ Chase သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံး DC ကရုပ်ပြဇာတ်ကောင်အဖြစ်မြို့လမ်းများတို့၌မှတဆင့် Racing အဖြစ်ပေါ်သည်။ သူရဲကောင်း Feeling? ထိုလူကြမ်းဖမ်းနှင့်ထိုမြို့၌ကယ်ဖို့တစ် DC ကစူပါသူရဲကောင်းအဖြစ် Play ။ အပြစ် Feeling? ထိုလူကြမ်းနှင့် esca အဖြစ် Play
Angry Birds ဂိမ်းစူပါပြိုင်ကား
Angry Birds ကသူ့စက်ဘီးအပေါင်းတို့၌မစ်ရှင်လွန်ကူညီပါ!
ဘင် 10 ATV
ကျနော်တို့အခုသင့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဘင် 10 ဒေါက်တာဘွဲ့ Russ အနိုင်ယူအားမိမိအစိမ်းရောင်စွမ်းအင်မြှင့်တင်ရန်စုဆောင်းဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ATV အပေါ်ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်စုဆောင်းစတင်။ အဆိုပါအချိန်ထွက်ပြေးနေပါသည်!
ဘင် 10 အနုမြူ Transporter
ဘင် 10 မိတ်ဆွေများ, Gwen နဲ့ Kevin ဖမ်းမိခဲ့ကြပြီးရွေးနုတ်ဖိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်သူရဲကောင်းတစ်ဦးအလွန်အန္တရာယ်များသောအနုမြူဗုံးတာဝန်ခံသယ်ကလူကြမ်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘင် 10 ယခုနောက်တဖန်သူကြိမ်မြောက်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်စနစ်တကျအပေါငျးတို့အဆင့်တွေ့ဆုံရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်
Power က Rangers Motocross
Power က Ranger ကသူ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်အတားအဆီးကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားနေသည်။ သငျသညျသူ့ကို 21 အဆင့်လွန်ခြင်းနှင့်အနိုင်ရကူညီရန်သင့် Dexter ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Transformers Truck ကား
Transformers လူသားကိုကူညီနှင့်ငါတို့အပြေးပြိုင်ပွဲကိုကယ်တင်, သငျသညျကိုအမေရိကန်စစ်စခန်းမှကုန်စည်အားလုံးပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ Autobots Roll Out!
ဘင် 10 မြို့ပြ Jeep
ဘင် 10, မိမိအမြို့ပြ jeep အတွက် drive ကိုထွက်သည်ဖြစ်၏ ben 10 ပူဖောင်းများစုဆောင်းစတိုင်အတွက်အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်
ဘင် 10 ATV Escape
သူမြန်သူသည်မိမိအ ATV အပေါ်သူသည်မိမိအမီးအချိန်ရန်သင်၏အကူအညီလိုအပျနိုငျသညျအဖြစ်စီးနှင့်ရန်သူရှောင်အဖြစ်ဘင် 10 လွတ်မြောက်စိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုကူညီပါ
ဘင် 10 Ultimate Moto
ပျော်စရာ ben 10 drive ကိုဂိမ်း။ သင့်ရဲ့စက်ဘီးမောင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအစာရှောင်ခြင်းအပေါင်းသည်အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်။
ဘင် 10 Kart 2
ဘင် 10, Gwen, မက်စ်သို့မဟုတ်ကီဗင်အဖြစ်မျိုးနွယ်။ အသီးအသီးမျိုးနွယ်အတွက်ပထမဦးဆုံးပြီးအောင်ရန်သင့် weapons.Try သုံးပြီးဖြင့်သင့်သူချင်းပြိုင်ကားသမား Beat နှင့် collext ဂြိုလ်သား bals